Vaovao - mila menaka avo lenta ve aho?
Ampahany amin'ny fiainana ny fahanterana. Rehefa nandeha ny taona, dia tsy mandeha tsara toy ny taloha intsony ireo ampahany izay mahatonga antsika hanisy marika. Toy izany koa ny fiara. Milomano izy ireo ary ny fiara efa antitra manana kilometatra avo kokoa dia mila fampitomboana fanampiny mba hitazomana tsara ny fizotran'ny raharaha. Eo no miditra ny menaka mileage avo!
Tahaka ny ahafahanao mandray fepetra hitazomana ny fahasalamanao any aoriana any amin'ny fiainana, dia azonao atao ny manome menaka kilometatra ambony ny fiaranao mba hanakanana ny akanjo sy ny ranomaso mifandraika amin'ny fahanterana. Fa ahoana no ahalalanao ny fotoana hanombohana mampiasa azy? Ho an'ireo fiara 75000 kilaometatra na mahery, mety ho izao ny fotoana.
Ka inona marina ny atao hoe menaka mileage avo?
Araka ny anarany, ity karazana menaka motera ity dia namboarina hamahana ireo olana manokana atrehin'ireo fiara mileage be, na ireo izay mihoatra ny 75.000 kilaometatra. Izy io dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanjifana solika, ny setroka ary ny gazy avy amin'ny maotera taloha. Ny menaka mileage avo dia mandeha ihany koa mba hampihenana ny fivoahan'ny rano sy ny renin'ny menaka.
Na dia azonao atao aza ny mampiasa menaka mileage avo amin'ny fiara tanora kokoa nefa tsy manimba azy, ny olana izay matetika adiresin'ny solika mileage dia matetika tsy miseho amin'ny fiara izay latsaky ny 75.000 kilaometatra.
Ahoana no fiasan'ny solika mileage avo?
Ny menaka mileage avo dia miasa toy ny multivitamin mahery, mamerina amin'ny laoniny ny motera efa tonta ary misoroka ny akanjo sy rovitra lavitra.
Rehefa manitatra sy mamelombelona ny tombo-kase ireo mpampita tombo-kase ao anaty menaka mileage avo dia vitsy ny menaka mivoaka avy ao amin'ny moterinao. Izany dia miteraka fihenan'ny solika, izay midika fa vitsy ny fanovana solika ary vitsy ny olan'ny motera eny an-dàlana.
Ny menaka mileage avo dia misy koa antioxidants, detergents ary additives isan-karazany hampihenana ny akanjo sy ny fikorontanana - ny zavatra rehetra mahasoa ny maotera mihoatra ny vanim-potoana voalohany. Ireo akora ireo dia manadio ny fotaka sy ny fotaka izay voajary rehefa mandeha ny fotoana, sady mampihena ny fifandirana ka mitraka toy ny saka ny moterao.
Iza no mila menaka mileage be?
Ny fiara manana 75000 mahery amin'ny odometrany dia matetika no mahazo tombony amin'ny menaka mileage avo. Ireo fiara antitra izay misy kilometatra vitsy kokoa dia afaka mahazo tombony ihany koa, satria mety ho simba rehefa mandeha ny fotoana ny tombo-kase maotera na inona na inona kilometatra. Ny tombo-kase voaongana dia midika hoe menaka manitsaka, ary ny menaka mamoaka dia midika fa tsy mandeha amin'ny tsara indrindra ny moteranao.
Azonao atao ny mifamadika amin'ny menaka mileage avo raha:
§ Averinao any ivelan'ny garazy ny fiaranao ary mahita tasy solika amin'ny tany nijanonan'ny fiaranao ianao. Mitete menaka afaka manondro loosening ny maotera faritra.
§ Mijery eo ambanin'ny kapaoty ianao ary mahita ny tadin'ny solika amin'ny faritra maotera ambany.
§ Feo mahery noho ny mahazatra ny moteranao. Ny tabataba mikotrokotroka dia mety hanondro fa afaka mahazo tombony amin'ny motera motera matevina ny moteranao, izany hoe ny menaka mileage avo.
Raha tapa-kevitra ny hitandrina ny fiara mandritra ny fotoana maharitra ianao, mifikira amin'ny serivisy fikojakojana fisorohana tsy tapaka, indrindra ny fiovan'ny solika misy menaka mileage avo.
Ahoana ny tombotsoan'ny motera avy amin'ny menaka mileage avo?
Ny menaka mileage avo dia miresaka ny fahalemena manokana ao amin'ny moteranao izay misy ifandraisany amin'ny fahanterana. Toy ny menaka fanasitranana ho an'ny faritra maotera be loatra.
§ Fanjifana solika mihena: ny fiara mileage be dia be mivoaka ary mandrehitra menaka betsaka noho ny fiara tanora noho ny tombo-kase maotera. Ny menaka mileage avo dia mamelombelona ny tombo-kase simba, izay mitarika amin'ny fihenan'ny solika sy ny fandoroana azy.
§ Vovo-motera kely kokoa: ny maotera antitra dia mazàna manangona fotaka navelan'ny menaka motera hafa. Ny solika mileage avo dia tapaka ary mamoaka ny fotaka sisa tavela.
§ Fiarovana amin'ny fahasimbana: Ireo fiara mileage be dia be no mijaly noho ny fitafiana sy rovitra ankapobeny kokoa noho ny fiara tanora. Ireo additives amin'ny menaka mileage avo dia miaro sy miaro ny motera anao manontolo.
Vonona ny hiova menaka mileage be aho!
Na firy na firy (na firy) ny kilaometatrao amin'ny fiaranao, ny fanovana menaka voalahatra tsy tapaka dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny fiaran'ny fiara ho lava kokoa. Rehefa miroso amin'ny fanovana solika manaraka anao any amin'ny Firestone complete Auto Care ianao dia anontanio ny teknisianinao momba ny fiovan'ny solika mileage be, indrindra raha hitanao ny tasy solika ao amin'ny lalambenanao na henonao ny fikomian'ny motera. Ny fanovana solika mileage avo dia mety manampy ny fiaranao hahatratra ny dingana lehibe manaraka!
Fizarana famehezana, Tombo-kase vita amin'ny landy, Auto Accessory, Groove solika, Piesy detase, Fehezo ny bushing arm,